Snorkie: Baro eeygaan jecel ee jecel - Taranka
Snorkie: Baro eeygaan jecel ee jecel
Raadinta eey gebi ahaanba daacad u ah, jecel inuu ciyaaro, gurigaaga ilaalin doona, oo leh shakhsiyaad is dul saaran, laakiin weligiis ma dagaal badna? La kulan Snorkie!
Isku darka Terna Schnauzer iyo Yorkshire waxaa mararka qaarkood loo yaqaan a Schnorkie , Shnorkie , Schnerrieror - laakiin wax kasta oo aad ugu yeerto, isagu waa 100% la jecel yahay.
La kulan isku dhafka Yorkshire Terrier iyo Schnauzer
Marabtaa inaad waxbadan ka ogaato noocaan isku dhafan? Nala joog oo aqriso!
Waa maxay dhab ahaan Snorkie?
La kulan waalidiinta Yorkshire Terrier iyo Miniature Schnauzer
Maxay la mid tahay la noolaanshaha Snorkie?
Marka sidee u daryeeli kartaa Snorkie?
Snorkies ma yihiin eeyo caafimaad qaba?
Marabtaa inaad keento Snorkie guri?
Waa maxay eeyaha kale ee halkaa jooga ee la mid ah kuwa loo yaqaan 'Snorkies'?
Waxaa jira waxyaabo badan oo laga jeclaado isku darka Schnauzer Yorkshire
Marka waxaan ognahay inay tahay isku darka Schnauzer iyo Terr Yorkshire, laakiin waa maxay dhab ahaan Snorkie?
Yorkie Schnauzers waa eeyo naqshadeeye oo aan si rasmi ah u aqoonsaneyn Naadiga Kennelka Mareykanka (AKC), si ka duwan waalidkeed daahir ah.
Macno malahan, iyagaa aqoonsan Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka (ACHC), kan Naadiga Naqshadeeyaha eeyaha Naadiga (DDKC), iyo Diiwaanka Eyga ee Mareykanka (DRA), iyo sidoo kale kan Diiwaan Geliyaha Cunnada Caalamiga ah (IDCR).
In kasta oo ay yihiin isku dhaf gaar ah labada, Snorkie wuxuu hayaa qaar ka mid ah astaamaha waalidkeed.
La kulan Gunta yar ee Schnauzer
Schnauzers yar-yar waxaa lagu dhajiyay Jarmal ahaan ugaarsade jiir, iyo Yorkshire Terriers waxaa loogu soo halgamay England ujeeddo isku mid ah. Xaqiiqdii iyagu haynta dareenka ugaarsiga .
La kulan Yorkshire Terrier Dog
Yorkies waa eeyo waaweyn oo toy ah oo culeyskoodu yahay 7 rodol oo qaba jaakad dheer, qulqulaysa. Schnauzers waxay ku yimaadaan saddex cabbir, oo leh snorkies-ka ayaa laga soo saaray cabbirka yar-yar. Qalabka yar yar miisaanka u dhexeeya 11-20 rodol.
Snorkie-ka waxaa suuragal ah in markii ugu horreysay lagu cuno Mareykanka, in kastoo aysan caddeyn halka ay ka yimaadeen ama goortii ugu horreysay ee la soo saaray. Shaki kuma jiro qof inuu eegay labada nooc oo uu ku fekeray: 'miyaanay noqon doonin kuwo isku qasan!'
Maxay u egyihiin?
Natiijadu waa eey u muuqda wax u eg Yorkie marka loo eego Schnauzer, oo leh silky, timo toosan.
La kulan cookie, isku darka Schnauzer Yorkshire Terrier - Isha sawirka
Waxay sidoo kale leeyihiin wajiga dawacada u eg ee Terrier-ka Yorkshire.
Koodhadhkoodu waa cufan yahay, oo macnaheedu yahay diyaar u noqo inaad ka baxdo burushka!
Waxay yihiin eey yar oo daadanaya oo la tixgelinayo hypoallergenic - waa war wanaagsan oo loogu talagalay dadka xasaasiyadda ku leh eyga!
Snorkies-ku waxay ku yimaadaan buluug, madow, bunni, fawn, casaan, cadaan, cawl, iyo isku dar kasta oo midabadan.
Dhegahoodu way toosnaan karaan, sidoo kale loo yaqaan 'feedked'.
Immisa ayey helayaan?
Waalidiinta caynkaan oo kale ah, waxaa laga yaabaa inaad la yaaban tahay intee ayuu Snorkie helayaa?
Way adagtahay in si sax ah loo sheego maxaa yeelay way kala duwanaan karaan. Eyda badankood culeyskoodu waa 5 ilaa 12 rodol (2 iyo 5 kg), laakiin qaarkood waxay gaarayaan 25 rodol (11 kg). Waxay joogi karaan meel u dhaxeysa 5-14 inji (13-36 cm) oo garabka ah.
Taasi waa wax kala duwan! Wax walboo waxay kuxiranyihiin cabirka waalidka.
Goobaha snorkyada qaar si ula kac ah ayaa loo kariyaa. Waxaad arki doontaa tan oo lagu tilmaamo eyga cabbirka barshada. Kuwani waxay ku dhow yihiin 5 rodol (2 kg) iyo 5 inji (13 cm) dheer.
Snorkies waa farxad lagu noolaado, laakiin ma ahan kuwo si fudud u socda oo gebi ahaanba ku xeel dheer milkiilayaashooda. Waxay noqon karaan madax adag iyo madaxbanaan mararka qaarkood. Weli, waxay jecel yihiin inay shaqeeyaan oo sida ugu fiican wax u qabtaan markay shaqo haystaan.
Waxay kaa caawin kartaa inaad ka fogaato qulqulkaas madax adag.
Ujeeddadaas rabitaanka ah inay ka farxiso waxay gacan ka geysaneysaa isu dheellitirka xariiqdaas madax adag oo maskaxdooda firfircoon ku mashquulisa si aysan uga fikirin siyaabo ay dhibaato ku galaan.
In kasta oo ay madax adag yihiin, had iyo jeer way yihiin saaxiibtinimo iyo gebi ahaanba daacad . Haddii aad rabto eey eey dhabarka kaa haysato, tani waa nooc wanaagsan oo laga fiirsado.
Fiiri fiidiyowgan Snorkie ee loo yaqaan Rocky, oo muujinaya Bullmastiff oo madax u ah:
Markaad kahadasho inaad haysatid dhabarkaaga, waxay noqon karaan dab iyo geesi , oo diyaar u ah inay qaataan wax kasta oo ay ku ilaalinayaan naftooda iyo milkiilayaashooda. Eygan yar ee noocaas ah, waxay leeyihiin tan ah geesinimo .
Dabeecadaas geesinimada leh ayaa sidoo kale loo turjumi karaa jiritaankooda madaxnimo , ololaya , iyo xoog leh , si kastaba ha ahaatee. Eygan xaqiiqdii maahan wax riixaya.
Markay daalaan, waxay jecel yihiin inay istuuraan, laakiin haddii aad isku daydo inaad ka dhigto inay socdaan ama wax qabtaan, waxay noqon karaan kuwo xoogaa yara niyadsan.
Sababtaas awgeed, waxay u baahan yihiin milkiile diyaar u ah inuu noqdo joogto ah oo ku adag tababarkooda . Waxaad ubaahantahay xoojin badan iyo dulqaad hadaad rabto (inta badan) eey si wanaagsan udhaqan.
Laakiin xitaa snorkie-ka ugu tababaran ayaa riixaya xuduudahaaga hadda iyo ka dib.
Sababtoo ah waa kuwo aad u daacad ah oo jecel, iyaguna way u nugul yihiin kala-go'id walaac . Waxaad u baahan doontaa inaad si taxaddar leh u tababbarto si aad u hubiso in tani aysan u beddelin dhibaato weyn xagga kaadida, calalinta, iyo xanaaqa.
Sida ugu wanaagsan ee eeyga loo baro inuu caadi ahaado markaad ka baxdo waa inaad siiso daaweyn intaadan ka bixin guriga.
Tani waxay baraysaa in bixitaanku la xiriiri karo waxyaabo wanaagsan! Kadib, markaad soo noqotid, isdeji oo ha abaalmarin. U dhaqan sidii markii aad tagtay oo kale ma ahayn biggie.
La kulan cookie, Snorkie - Isha sawirka
Waxaan soo sheegnay in snorkies ay yihiin ilaaliyayaal wanaagsan , oo iyagu waa. Waxay ku daawan doonaan gurigaaga iyo ardaaga wayna ku baraarujin doonaan haddii qof ama wax uun shaki u muuqdo.
Waxay ku sugan yihiin halkaas marka ay garaacaan albaabka waxayna diyaar u yihiin wax qabad marka ninka boosta diraayo uu yimaado.
Dhibaatada hab-dhaqankan feejignaanta leh ayaa ah inay isu beddeli karto ciyo joogto ah.
Waxay waliba 'kula hadlayaan', iyagoo kuu sheegaya goorta ay doonayaan inay ciyaaraan, seexdaan, socdaan, xiiqdaan, cunaan, ama ay iyagu doonayaan darteed.
Adigu taas ma doonaysid, sidaa darteed waxaad u tababbari doontaa snorkie-gaaga inuu u hoggaansamo amarradaada marka ay timaaddo ciyo.
Waxaad ku sameyn kartaa tan adoo weydiinaya inay 'aamusnaadaan' oo aad u abaalguddo markay joojiyaan ciinta. Tani waxay baraysaa in joojinta markaad weydiiso ay tahay wax wanaagsan.
Waxa kale oo aad bari kartaa amarka “jilif” Marnaba kama joojin doontid eeyga inuu ciyo gabi ahaanba, marka way fiicantahay inaad u sheegto markay caadi tahay.
Kadibna waxaa jira tababarka . Eygaagu wuxuu u baahan doonaa is dhexgal wanaagsan markay da 'yar yihiin, oo lagu daro tababar joogto ah noloshooda oo dhan. Saxeexitaankooda fasalka adeeciddu waa fikrad fiican.
Waad ku mahadsantahay cabirkooda yar, waxay sifiican uga shaqeeyaan guri dabaq ah ama kondho, laakiin markale, waxaad ubaahantahay inaad iska ilaaliso qayladaas. Waxay sidoo kale ku faraxsan yihiin beer weyn oo leh qol ay ku dhex wareegaan - oo ugaarsadaan!
Snorkies-yada wax yar ayey ka shaqeeyaan. Mashiinka timaha ee xiisaha leh wuxuu u baahan yahay qurxin joogto ah iyo heerkooda sare ee tamarta waxay u baahan yihiin jimicsi fara badan.
Waxaad siin kartaa iyaga timo kala duwan oo la jeclaan karo, laakiin maskaxda ku hay inaad u baahan doonto ha loo jarro 6-8 toddobaad kasta.
Waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad cadayato labadii maalmoodba mar oo aad maydho labadii toddobaadba mar.
Fiidiyowgaan wuxuu muujinayaa waxa ku jira jarista timaha Snorkie.
Qaar ka mid ah timo jarista aad siin karto snorkie-ka waxaa ka mid ah: jeexjeexyada orsada, goynta xagaaga, snorkie face cut, a puppy cut, cut them all all, or leave their hair long.
Waxa kale oo aad u baahan doontaa inaad dhagaha dhagaha ka mariso dhawrkii maalmoodba mar oo aad siiso nadiifin fiican usbuuciiba mar. Snorkies-ku waxay yeelan karaan dhibaatooyin ilkaha ah, sidaa darteed caday ilkahooda maalin kasta oo iyaga sii calalka ilkaha.
Iska yaree iyaga ciddiyaha joogto ah. Haddii aad ku maqasho jabaq-jug-jug dhulka sagxad ah markay socdaan, waxaa la joogaa waqtigii la hagaajin lahaa. Waxaad ku samayn kartaa mashiinka mashiinka lagu jaro ama cidiyaha wax lagu gooyo.
Markay tahay jimicsiga, waxay u baahan yihiin ugu yaraan 30 daqiiqo maalintii si looga shaqeeyo xoogaa tamartaas ah. Tani waxay noqon kartaa qaab socod, baacsiga kubbadda, dabaasha, orodka, socodka, ama ciyaar qarsoon.
Wanaagsan, jimicsi joogto ah ayaa fure u ah in lagaa caawiyo inaad xaddiddo xaddiga ciyey ee cunuggaaga iyo inuu ku soo celiyo xarragadaas madax adag. Waxaad dooneysaa inaad higsato 5 mayl oo socod ah / soo qaadasho asbuucii ah.
Snorkies waa inay heshaa 1/2 koob ilaa koob cunto ah maalintii , wuxuu u dhexeeyaa laba ama saddex cunto. Waxaad dooneysaa inaad hesho raashin tayo sare leh oo hilibkiisu yahay maaddada ugu horeysa. Ka taxaddar filleyaasha sida galleyda iyo qamadiga.
Cuntada wanaagsan qiimaheedu waa ka sii qaalisan yahay, laakiin wax buu tarayaa Eygaagu wuu caafimaad qabnaan doonaa, wuxuu yeelan doonaa jaakad dhalaalaysa, wuxuuna yeelan doonaa saxaro yaryar. Taasi way fiicantahay markay tahay in la nadiifiyo dayrka!
Nasiib darrose, snorkyada waxay leeyihiin qaybtooda dhibaatooyinka, laakiin warka wanaagsani waa taas waxay noolaan karaan 12-15 sano haddii ay helaan daryeel habboon oo aysan qabin wax cudurro nafta halis geliya.
Waxaad u baahan doontaa inaad iska ilaaliso waxyaabaha sida dhibaatooyinka ganaca, dhibaatooyinka wadnaha, patellas luxating, Legge Perthes cudurka, burburka tracheal, hypoglycemia.
Dhibaatada dambe waxay dhacdaa marka sonkorta dhiiggaaga saxaradu dhacdo oo waxay u horseedi kartaa burbur ama xitaa dhimasho.
Si aad u xakameyso, waxaad u baahan tahay inaad eeygaaga siiso cunno joogto ah isla markaana aad isha ku hayso oo aad iska ilaaliso calaamadaha shilalka sonkorta dhiigga.
Sida eyda yaryar badankood, waxay yeelan karaan qaar dhibaatooyinka ilkaha , oo ay ku jiraan ilkaha oo aad u camiran, ilig lumis, qaniinyo hoose, iyo qaniinyo badan. Taasi waa sababta cadayga ilkuhu uu muhiim u yahay. Waxa kale oo aad u baahan doontaa inaad u qaadatid iyaga nadiifinta ilkaha caadiga ah.
Isha ku hay iyaga dhegaha iyo indhaha dheecaanka ama dhibaatooyinka kale. Madaxa ugu tag dhakhtarka xoolaha isla markiiba haddii aad dareento ur xun, dheecaan ama casaan.
La kulan Bella, Snorkie - Isha sawirka
Haddii aad rabto inaad u furto gurigaaga snorkie samatabbixin ah ama aad raadineyso eey yar oo aad adigu wacdo, waxaa jira siyaabo fara badan oo aad gacmahaaga ugu saari karto qashin jilicsan.
Kuwa badan baa jira ururada samatabbixinta dibedda, oo ay ku jiraan Badbaadinta xayawaanka Midwest iyo Waxay u qalmaan Samatabbixin Ey Ka Fiican . Waxa kale oo aad ka hubin kartaa ururada samatabbixinta maxalliga ah si aad u ogaato haddii ay hayaan snorkie.
Qaar ka mid ah samatabbixinta schnauzer iyo Yorkie waxay yeelan doonaan schnorkies sidoo kale. Baadhid Samatabbixin Yaryar Schnauzer ama Gurmadka qaran ee Yorkshire terrier .
Waxa kale oo jira tiro badan oo ah kuwa sameeya dibedda, laga bilaabo Florida illaa Seattle, laakiin waxaad u baahan doontaa inaad hubiso inaad sameyso cilmi-baaristaada ka hor intaadan guriga eey ka keenin wax-soosaara kasta. Filo inaad bixiso meel u dhexeysa $ 500 iyo $ 1000.
Alaabada lagu ciyaaro Beerta waxay ku dhalataa snorkies-ka Oklahoma, sidoo kale C iyo K Kennel .
Maskaxda ku hay in aynaan aqbali doonin mid ka mid ah kuwaan soo koraya.
Waxaa jira waxyaabo yar oo aad daawan karto si aad uhesho abuur wanaagsan. Marka hore, hubi dib u eegisyadooda oo samee raadinta Google. Ka dib, la soco haddii eey u muuqdo mid si gaar ah u jaban. Waa inaad ka fogaataa ganacsi kasta oo leh badhanka PayPal.
Runta murugada leh ayaa ah in eeyo badan oo naqshadeeyayaal ah, sida Yorkie schnauzers, ay ka faa'iideystaan ​​daaqayaasha daarada gadaal ka raadsanaya inay dhaqsi deg deg ah uga helaan kharashka nolosha eeyohooda. Cunnooyinka snork ee saboolka ah ayaa badanaa leh dhibaatooyin xagga dhaqanka ah iyo arrimo caafimaad.
Ey raqiis ah ayaa ku dambeeya inuusan aheyn mid aad u jaban marka aad ku kacdo qiimaha tababarka iyo daryeelka caafimaadka.
Haddii aad jeceshahay fikradda snorkie, laakiin aadan hubin inay adiga kugu habboon yihiin, waxaa jira dhowr nooc oo isku mid ah oo aad iska fiirin karto.
Tan waxaa ka mid ah snorkie lagu qasay busta yar, maltese lagu qasay snorkie, isku darka schnauzer poodle, ama isku darka schnauzer chihuahua.
Laga soo bilaabo shakhsiyaddooda baaxadda weyn iyo dabeecaddooda daacadda ah, waxaa jira tan lagu jeclaado Snorkies. Tababbarka saxda ah, jimicsiga caadiga ah, iyo rushaynta jacaylka, waxay noqon karaan xayawaanka ugu fiican ee aad waligaa ku riyoon jirtay.
Adiguna see tahay? Maxaad u malaynaysaa isku-darka 'Snorkie'? Ma rabtaa mid? Dhammaan wax nooga sheeg adoo faallo ka bixinaya xagga hoose.
Keeshond Dog Information & FAQs
Goldador: Cajiib Cajiib Ah Combo
Dooro Sirdoonka A
Baro Aqoonsiga Yar ee Dahabka Ah
Magacyada Eyga Irishka iyo Macnaheeda: 200+ Magacyada dhaqanka ee fromire
Rottweiler Pitbull Mix - Tilmaamaha Mulkiilayaasha oo dhameystiran oo loogu talagalay Pitweilers
Ma Sheepadoodles ayaa ku habboon adiga?
Labradoodle: Maxaad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Doodle-ka Koowaad
Hoos udhaca ku yimi shaybaarka 'Chow Mix': Waxaad U Baahan Tahay Inaad Ogaato
Adhijir Jarmal ah oo Timo dheer leh: Waxa la Ogaado Kahor Iibsiga
Nooc Dog 101: Waa maxay Labradoodle Guntin?
Tilmaamaha Micro Pomeranian: 5 Xaqiiqo Waa Inay Akhriso
Soo Celinta Dahabka ah iyo Labradors: Eygee ayaa ugu fiican?
waa maxay eeyga noocee ah ayaan leeyahay
sidee u shaqeysaa tillaabada suunka
isku dhafka shaybaadhka ciribta buluuga ah ee jaalaha ah
magacyada eey adhijir jarmal ah
Taranka Eyga Su'aalaha La Weydiiyo Caafimaadka Eyga Sahayda Eyga Tababarka Eyga Featured Magacyada Eyga Caafimaadka Tababarka Eeyga, Featured
© 2022 | Xuquuqda Daabacaadu Way Xifdisan